Sharma Boy oo loo dhaadhiciyey xabsiga weyn ee Garoowe & wararkii ugu dambeeyey ee kiiskiisa.
May 30, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (Garoowe)-Fanaanka raabka ku caanbaxay ee Sharma Boy ayaa maalintii 2aad ku xiran magaalada Garoowe kadib shil shalay ka dhacay inta u dhexaysa magaalada Garoowe iyo deegaanka Buura-wadal ee gobolka Sool.
Sharma Boy ayaa loo gudbiyey xabsiga weyn ee magaalada Garoowe kadib markii shil uu galay gaarigiisu ay ku geeriyootey gabar kamid ahayd dhalinyarada magaalada Garoowe uuna ku dhaawacmay mid kamid ah asxaabtiisa gaarka ah.
Mid kamid ah saraakiisha ciidanka bilayska gobolka Nugaal ayaa sheegay in fanaanka loo dhaadhiciyey xabsiga weyn ee Garoowe inta ay ehelka marxuumadda iyo Sharma ka heshiinayaan kiiskaan sababay dhimashada iyo dhaawaca hal ruux oo shacab ah.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada ka taagnaa khilaaf u dhexeeya fanaanka lagu magacaabo Sharma Boy iyo Suxufi Daahir Calosaw kadib markii labada dhinac ay isku khilaafeen bandhig faneed ka dhacay magaalada Muqdisho.
Kkkk, DAMEER CASLISOW WAA ISBAARISTE INAN GUMEED AH
SHALAYTO GABAR AYUU GAARI DUL BARIYAY BERITO KUWA KALE AYUU KABIHIISA LA DULMARI DOONAA WAA WIIL SHARWADE AH SHAYDAAN LA SHAQEYTA , DHALINYARTA PUNTLAND KU NOOL WAA IN LAGA BAD BAADIYAA SHAYDAANIMADIISA IYO KUWA LAMIDKA AH EE FANAANIIN LABAXAY EE FISQIGA WADA .